မြန်မာအသင်း ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိနေ
20-Aug-2017 tagged as မြန်မာ မလေးရှား
မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာအသင်း ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် အထောက်အထား မပြနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိနေသည်ဟု အဆိုပါနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသာ သတင်းထောက်များ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
KL. Day 6
20-Aug-2017 tagged as မြန်မာ ဘောလုံး မလေးရှား
“နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းကို မမီပါဘူးဗျာ။ ကြည့်ကောင်းအောင်တော့ လုပ်သွားတာပဲ”
လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် မလေးရှားနှင့်ပွဲအတွက် လက်မှတ်မဝေရန် ဆုံးဖြတ်
မလေးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေနှင့် အထောက်အထား မပြနိုင်သော ဘောလုံးပရိသတ်များကို ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိနေသောကြောင့် မြန်မာအသင်းနှင့် မလေးရှားအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အတွက် လက်မှတ်မဝေရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုသိန်းက ပြောကြားသည်။
KL. Day 2
16-Aug-2017 tagged as မလေးရှား SEA Games
“ခေတ်ကြီးက အင်မတန်မြန်ဆန်ပြီး ဘာမှဖုံးကွယ်ထားလို့ မရနိုင်တော့တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာခေတ်ကြီး။ ဒီလိုခေတ်ကြီးမျိုးမှာတောင် မလေးဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး အာဏာပိုင်တွေက ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် Facebook Livestream လွှင့်ဖို့တောင် ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတော့ ဒီကိစ္စဟာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအတွက် အင်မတန် အရုပ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်သွားပါပြီ”
“ရန်ကုန်မှာ ည ၁၀ နာရီကျော်ရင် လူခြေတိတ်သွားပြီ။ ကိုယ့်ဆီ လာလည်တဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက် သွားစရာ လည်စရာ မရှိတော့။ ကိုယ့်ဆီမှာက အနှိပ်ခန်းဆိုလည်း မကောင်းတဲ့နေရာ၊ ကေတီဗီဆိုလည်း မကောင်းတဲ့နေရာ။ အခု ဒီမှာကျတော့ ကေတီဗီတွေရော မာဆတ်တွေရော မီးရောင်တထိန်ထိန်နဲ့ စည်လို့ကားလို့။ လူတွေကလည်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးလို့”
ယူ ၂၂ အသင်း၏ ပွဲစဉ်အားလုံးပြမည် မဟုတ်ဘဲ မလေးရှားအသင်းနဲ့ ပွဲသာ တိုက်ရိုက်ပြမည်
15-Aug-2017 tagged as မြန်မာ မလေးရှား
မလေးရှားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ SEA Games ပြိုင်ပွဲရဲ့ အမျိုးသားယူ ၂၂ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာယူ ၂၂ အသင်း ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပွဲစဉ်အားလုံးကို တိုက်ရိုက်ပြသမှာ မဟုတ်ဘဲ အိမ်ရှင်မလေးရှားအသင်းနဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲကိုပဲ တိုက်ရိုက်ပြသတော့မှာပါ။
25-Jul-2017 tagged as မလေးရှား ပြည်ပအလုပ်အကိုင်
အလုပ်သမား စေလွှတ်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမား ၉၀ဝ ကျော်ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဩဂုတ်လ ပထမအပတ်တွင် စေလွှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
မလေးရှားသို့ အလုပ်သမား ပြန်လည်စေလွှတ်ခွင့်ပြု
28-Jun-2017 tagged as မလေးရှား
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ခွင့် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားမှုကို ဇွန်လ၂၇ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြန်လည် စေလွှတ်ခွင့်ပြုပြီဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။